Horukon ezisezantsi-set osemqoka, ukubona indlela ngexesha lika
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Horukon ezisezantsi-set osemqoka, ukubona indlela ngexesha lika
Kwi computer, kunye iseti yokuthengisa, nguye lo capture eholweni conserver na ukwazi oko ukulawula imali. Njengoko kwisigaba ukuba amisele ipesenti inkokhelo, phezulu-amisiweyo, isicwangciso ephakathi, oko kuthiwa izicwangciso sityhafile. Xa, into leyo kwenzeka isicwangciso eliphantsi xa ufuna ukuchonga ngaphambi kwexesha, siza kujonga enoba kukho nayiphi na into enjalo enjalo. isicwangciso ephantsi kuba kukho ngaphezulu noluvo lokuba kangangoko ukubona lula ngokumiswa eliphezulu.
umzekelo, kuba saphinda kungene ukufikelela eqhelekileyo, kwaye ayisoloko ukuza kufikelela kule iiyure zokusebenza ezimfutshane, ingenzwa lula ukususa isivuseleli Atsurichi, ukufikelela umboniso na ukuqhubela zingabonakala nje into enye, nayo ukuthembeka ngequbuliso a ukufikelela ephantsi abatyedi jackpot, oko kuya kubonakala iimbono ezininzi ezinxulumene isiphumo kude. Ukuba ukhangela le ndlela, ucwangciso ephantsi jikelele ngokungathi uza kuya ukuba imbono ukuba kumiselwa inxalenye ezinxulumene nemveliso.
koko, iimpawu zezona zixhaphakileyo elandelayo, enoba enkulu bawurhuqa hit enkulu, ngokulula utsale imali ephantsi hit, ukuba kukho into kule post-jackpot ongavelisi pullback kwi iiyure zokusebenza ezimfutshane.
Ukongeza, kwimeko izicwangciso aphezulu okanye izicwangciso aphakathi, kodwa ukuba into efana ibhola ungasondeli kwenzeka ukuqala, xa isicwangciso esisezantsi, ifikelele ibhola endhawini ekuqaleni ukuya koko, ukuba uqale kakhulu ngaphandle kokufaka, oko kwenzeka yinkolelo yokuba ezula jikelele.
Kodwa into enjalo, kubonakala ezinye izinto zenzeke okunene, ukuba kwelase kuba kuxhomekeke kwakhona kwi-hlengiso ye-isikhonkwane, nabo bonke kwenzeka ukuqinisekisa isicwangciso esisezantsi xa, ukuya uluvo malunga akakwazi ukuba kuhle kodwa abanye.